Mashoko Ekudzivisa muemails | Martech Zone
Mashoko Ekudzivisa muemails
Muvhuro, Kukadzi 13, 2012 Svondo, Kukadzi 12, 2012 Douglas Karr
Ndakanzwa zvirinani zvirinani nezve yanguwo tsika tsika email mushure mekuverenga kuona iyi infographic kubva kuBoomerang. Wepakati email mushandisi anogamuchira zana nemakumi manonwe neshanu meseji, uye anoshandisa zvakapfuura 2 nehafu maawa paemail pazuva. Kunyange ini ndichida email senge svikiro uye isu tichishanda kuti tiibatanidze seyeti pamwe nevatengi vedu vese, aya marudzi e stats anofanira kukutyisidzira iwe mukugadzirisa yako email yekutengesa maitiro.
Your email kushambadzira mupi inofanirwa kupa chikamu uye kuronga kuitira kuti iwe ugone kudzikamisa huwandu hwemameseji auri kutumira uye unonangidzira kwavari… kuwana kuvimba nekucherechedzwa kwevanyori vako. Kuvandudza yakaoma mameseji zviitiko uye zvinokonzeresa zvinogona zvakare kuwanikwa uchishandisa a marketing automation injini.
Chero nzira, iwe unodzivirira kungo kumisikidza neese email mune marara… kana zvakatonyanya… mune isina tsamba email folda!
Iyi infographic inobva Boomerang, email plugin yeGmail. NaBoomerang, unogona kunyora email izvozvi uye wozvironga kuti itumirwe otomatiki panguva yakakwana. Ingo nyora iwo meseji sezvawaizowanzoita, wobva wadzvanya bhatani raTumira Gare gare. Shandisa yedu inotora karenda yekunhonga kana yedu yemavara bhokisi iro rinonzwisisa mutauro senge "inotevera Muvhuro" kutaurira Boomerang nguva yekutumira yako meseji. Tichatora kubva ipapo.
Zvemagariro Media Mari Yemubhadharo
3 Nzira dzeKushandisa Tsvagiridzo Yekunatsiridza Musika Ongororo
Kana kugamuchira mameseji gumi nemaviri kuchishandura kuita maminetsi makumi mapfumbamwe ebasa, zvinorevei chaizvo? Uye nei ungashanda muzvirongwa kunze kweiyo email chirongwa pachayo chiri chikamu che infographic yako nezve email?
Feb 13, 2012 at 11:18 PM
Mhoro @ariherzog:disqus ! Tiri kugovera Boomerang's infographic pano uye tichitaura nezvayo… haisi yedu. Kana riri basa rekunze kweemail, ndinotenda kuti vari kuyedza kupa kutarisa mune yekuwedzera kuedza kunogadzirwa kune avhareji mushandisi kana uchiverenga email. Maemail atinogamuchira anoda kuti tiite basa tisati tapindura. Ndiyo nyaya yacho. Nyaya iripo, ndagamuchira tsamba yako se email, ichida kuti nditarise iyo infographic zvakare uye nekukupindura. Kunyangwe iro risiri iro email-centric basa, rakagadzirwa nekuda kweiyo email kwandiri.
Kukadzi 13, 2012 na1:40 PM
Tinotenda nekugovera yedu infographic Doug. Lemon.ly yakave nenguva yakanaka yekushandira pamwe neBoomerang.
Feb 15, 2012 at 11:12 PM
Hapana kupokana kuti tese takakurirwa neyedu email inbox. Ndosaka zvakakosha kuti vatengesi vateme ruzha. Kuziva nguva yekutumira kunobatsira. Zviedze kuti uwane kuti inguvai inoguma mune yakanyanya kuvhurika rate.